Ukuphupha nge-Iceberg Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iintaba zinxulunyaniswa nemiba eyahlukeneyo kuluntu lwethu: kwelinye icala, zihlala zimela indawo yendalo emsulwa. Ubungangamsha bentaba ephakamileyo buthathwa njengonomtsalane kwaye kwangaxeshanye buhle, ngakumbi intaba enekhephu, yiyo loo nto abantu abaninzi bezonwabela iiholide kwimimandla esezintabeni. kwaye mhlawumbi ujonge kwiincopho eziphantse zingafikeleleki zeentaba ezinee-binoculars.
Kwelinye icala, ukunyuka intaba ngumceli mngeni, othi kwimeko entle uvuzwe ngombono omangalisayo ngaphezulu komhlaba. Ukunyuka kweNtaba i-Everest, umzekelo, yindawo yokuphupha kubantu abaninzi abathanda ukunyuka intaba.
Iintaba zikwadlala indima ebalulekileyo ekutolikeni kwamaphupha. Umzekelo, iintaba zinokuba sisizathu sokukhumbula oko sikuva emaphupheni. Abantu abaninzi bakwaphupha ngokunyuka intaba, okanye ubuncinci ukuyibona, okanye ukuba sele usecaleni kwayo kwaye ucinga el mundo. Nokuba unyuka intaba wedwa, ngesikhokelo sentaba, okanye neqela liphela, ukutolikwa kwalo mfuziselo wephupha akunzima kakhulu, kuba intaba ephupheni ihlala inentsingiselo ecacileyo.
1 Uphawu lwephupha «intaba» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «intaba» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «intaba» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «intaba» - ukutolikwa ngokubanzi
Intaba ifuzisela ephupheni ngokokuchazwa ngokubanzi. Umngeni yobomi bakho. Kubomi bemihla ngemihla kunokuhlala kukho iingxaki ezahlukeneyo kunye nobunzima abantu ekufuneka befunde ukujongana nabo. Incopho yentaba imele umntu ephupheni. iinjongo lomntu kuthethwa ngaye, inqaku ofuna ukufikelela kulo. Ukusuka apha, unethemba lokufumana isishwankathelo sento ethe yafunyanwa ukuza kuthi ga ngoku kunye nento eza kuza ebomini bokwenyani.
Isimo sephupha elibhekise entabeni libaluleke ngokukodwa ekutolikeni amaphupha. Ngaba woyika, woyika iinzame eziya kuthatha ukunyuka intaba? Okanye ngaba ukonwabile kwaye uqinisekile?
Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, ezi mvakalelo zikwabonisa isimo sengqondo somntu ekubhekiswa kuye ebomini bokwenyani. Ukuba awuqinisekanga, oku kubonisa ukuba ukuzijongela phantsi kunye noloyiko lokungakwazi ukuhlangabezana neemfuno ezithile. Iimvakalelo ezintle, kwelinye icala, zibonisa inqanaba eliphezulu lokuzithemba kunye ukuzithemba.
Iimeko eziqhelekileyo zephupha kunye nentaba zikwatolikwa ngolu hlobo lulandelayo:
Thatha ikhefu xa unyuka intaba: cela ukuzikhathalela ngakumbi kubomi bemihla ngemihla kwaye ungazixakekisi
(Ukuwa) ukuwa xa unyuka intaba: Isilumkiso esingxamisekileyo nokungxama; Isalathiso sokungaphumeleli okanye isidingo sokuyeka amathemba kunye neminqweno.
Ukunyuka okuncinci, intaba-encinci ebonisa inkathazo encinci phambili
Ukunyuka okunzima: ukubonakaliswa kwemeko yobomi enzima kakhulu
Ukunyuka intaba kunye: inkxaso evela kubahlobo ebomini bokwenyani
Ukunyuka phantsi kolawulo lwesikhokelo seentaba: isilumkiso sabahlobo bobuxoki; Inani leGunya
fikelela phezulu: impumelelo
cula entabeni: ufuna ukubonisa ulonwabo lwakho kwaye ungasazifihli
jonga indlwana yokuskiya entabeni - umntu kufuneka athobeke
Jonga umsantsa kwintaba-Imiceli mngeni engalindelekanga
Jonga ukugqitha kwentaba-Emva kohambo olunzima ebomini, ngoku ungakhangela phambili kwisiqalo esitsha
Bona inkwali entabeni: umntu kufuneka afune ulwazi oluqinisekileyo kubuntu bakhe
engakwazi ukunyukela phezulu: ukubonisa ukuba iminqweno yomntu kunye nemibono yakhe ayinakuzaliseka
Ukuhla: injongo ethile ebomini iphunyeziwe kwaye amaxesha okuzola aya kuqala; Isicelo sokulahla ikratshi
wehle intaba enezikhwitsi: ujonga eyona ndlela imfutshane yokufikelela usukelo
Ukubona ikhephu entabeni: izinto zothando zinokuhamba kakuhle
Ukujonga iimarmot entabeni: kuya kufuneka ulumkele umona kunye neentshaba.
Uphawu lwephupha «intaba» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwesimboli yentaba yephupha ubukhulu becala kuyahambelana nombono ngokubanzi. Ngokoluvo lwabanye abahlalutyi bengqondo, intaba ifuzisela iphupha elo ephupheni. ukujongana ngobuntu bakho kunye nendlela yobomi. Ibonisa indlela umntu ophuphayo azibona ngayo kunye nobomi bakhe, indlela ajamelana ngayo nobunzima bemihla ngemihla kunye neenjongo azibekela zona.
Nantsi imeko yomphuphi malunga nentaba kufuneka nayo Umfanekiso wakho kwaye inokunika ubungqina bokuba uyazithemba okanye awuzithembanga kangakanani kwimeko ezithile zobomi. Ukuba umphuphi unobunzima obuninzi bokunyuka intaba, kufuneka azikhathaze ngeenjongo zakhe zobomi. Kuba ezi zinokuba phezulu kakhulu.
Uphawu lwephupha «intaba» - ukutolika kokomoya
Intaba yinto ephambili kutoliko lwasemoyeni lwamaphupha: imele i Atención yobomi bomntu, kwaye umanya izulu nomhlaba ngamandla omntu.